4 Zaruriro Unogona Kufukura neSalesforce Dhata | Martech Zone
Vanoti CRM inongobatsira chete senge data irimo. Mamirioni evashambadzi anoshandisa Salesforce, asi vashoma vane nzwisiso yakasimba yedhata ravari kudhonza, zviyero zvipi zvekuyera, zvinobva kupi, uye kuti vanogona kuvimba nazvo zvakadii. Sezvo kushambadzira kuri kuramba kuchiwedzera kufambiswa nedata, izvi zvinowedzera kudiwa kwekunzwisisa zviri kuitika kumashure-kwe-zviitiko ne Salesforce, pamwe nezvimwe zvishandiso.
Heano zvikonzero zvina nei vashambadziri vachifanira kuziva yavo data mukati nekunze, uye makiyi ekunzwisisa iyo data.
Teedzera lead vhoriyamu kuburikidza neyako fanera
Kutungamira vhoriyamu ndeimwe yematanho akatwasanuka, uye metric yekutanga mutengesi wese anofanira kutarisa. Vhoriyamu inokuudza iwe iyo yakasvibirira nhamba yekutungamira iyo kushambadzira (uye mamwe madhipatimendi) akagadzira. Izvo zvakare zvinokupa iwe pfungwa yekuti iwe unogona kurova zvinangwa zvako zvekubvunza, kushambadzira vanokwanisa vatungamiriri (MQL), uye akavhara madhiri.
Iwe unogona kuteedzera vhoriyamu metric mu Salesforce nekumisikidza mishumo yekutevera ako mavhoriyamu nega yega fanera nhanho, uyezve nekumisikidza madhibhodhi kuti uone iyo data. Iwe unozogona kuwona vhoriyamu yezvinyorwa zvakawana danho rega rega.
Shandisa yako data yefannel vhorumu kuti uverenge yako shanduko yemitengo pakati pematanho
Sezvo anotungamira achifamba kuburikidza nefanera, zvakakosha kuti vanzwisise kuti vanoshandura sei kubva padanho kuenda padanho. Izvi zvinokugonesa kuti unzwisise mashandisiro anoita zvirongwa zvekushambadzira mukati medanho rekutengesa, pamwe nekuona nzvimbo dzedambudziko (kureva kushandurwa kwakadzika kubva padanho kuenda kune rinotevera). Uku kuverenga kunopa ruzivo rwakawanda kupfuura huwandu hwemavhoriyumu mbishi nekuti hunoratidzira kuti ndeapi macampaign ane akanyanya kutengesa mitengo yekutambira uye anobata padyo mitengo.
Iwe unogona kushandisa aya maonero kuti uvandudze maitiro ako ekutengesa uye upe yepamusoro mhando inotungamira kukutengesa. Zvinogona kuve zvinonetsa kuteedzera kutendeuka kwehuwandu muyakajairika Salesforce, asi kana iwe ukavaka tsika mafomula uye mushumo, saka iwe unogona zvakare kuzviona mumadhibhodhi. Pfupiso mafomula isarudzo yakanaka, nekuti iwo anotendera iwe kusefa uye kurongedza rondedzero yako kuti uone yako ekushandurwa mitengo nezviyero zvakasiyana.
Nguva inoratidzira yega yekushambadzira mhinduro yekutevera fannel velocity
Velocity ndiyo yekupedzisira yakakosha fanera metric yekutevera. Velocity inokuratidza iwe kuti unokurumidza sei kutungamira kufambira mberi kuburikidza neyako yekutengesa uye yekutengesa funnel. Iyo zvakare inoratidza iyo yakareba yako yekutengesa kutenderera iri uye inoratidza mabhodhoro pakati pematanho. Kana iwe ukaona izvo zvinotungamira kubva kune yakatarwa mushandirapamwe yakavharirwa mune yefanera nhanho kwenguva yakareba, izvi zvinogona kuratidza kutadza kutaurirana, kunonoka kupindura nguva, kana nzira isingawirirane. Vakashongedzerwa neruzivo urwu, vashambadziri vanogona kushanda kugadzirisa dambudziko iri uye nekukurumidza kumhanyisa mafambiro ekufambisa kuburikidza nefanera.
Iwe unogona kuteedzera faneli velocity mu Salesforce mishumo neyechitatu-bato kushambadzira kuita manejimendi maapplication, akadai pa Denderedzwa Rizere.
Enda pamusoro pechinyakare kubatwa kwekupihwa uye kuyera mushandirapamwe kukurudzira
Ipo iwe uchikwanisa kuteedzera yekupedzisira yekubata kupiwa natively muSalesforce, vashambadzi kazhinji vanoda nzwisiso yakadzama yekuita kwavo mushandirapamwe. Kashoma kuti mumwe mushandirapamwe uchave unogadzira kugadzirwa kwemukana Zvirongwa zvakaita seYakazara Circle Campaign Kufuridzira zvinokubatsira iwe kuwana zvirinani kushambadzira data neakawanda-ekubata kupiwa uye akaremerwa mushandirapamwe pesheni mamodheru. Izvi zvinokutendera iwe kuti unongedze iyo yakaenzana huwandu hwemari kune wese mushandirapamwe pane mukana uye kuratidza chaizvo kuti ndeapi macampaign akanyanya kukurudzira mukugadzira mukana wekutengesa.
Tags: basamushandirapamwe faneramushandirapamweCRMdenderedzwa yakazarayakazara denderedzwa crmfanera velocityfanera vhoriyamusales salesnelsalesforcebata chinongedzo
Izvo zvayakanakira nezvayakaipira yeaviri Opt-In Email Campaign